Izao no Hitantsika ao amin’ny Lahatahiry An-tseraseran’ny Gadra Politika Vietnamiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2018 6:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, Español, Ελληνικά, čeština , русский, Português, عربي, Deutsch, English
Lahatahirin'ny Vietnamiana Gadra Politika
Nanomboka tamin'ny Janoary 2018, manolotra sy manome hatrany ny torohay farany momba ireo gadra politika ao amin'ny firenena ny Lahatahirin'ny Gadra Politika Vietnamiana.
Naorin'ny 88 Project, vondrona iray miasa hanitatra ny fanampiana ireo gadra politika sy ny fianakaviany, ahitana lisitry ny mpikatroka miisa 113 izay tazonina, ary mbola miatrika famotorana mialoha ny fitsarana ny 23 amin'izany amin'izao fotoana izao ny tranonkala.
Voahitsy torohay isan-kerinandro ny tranonkala ahafahan'ny mpikaroka, mpanao gazety, mpanao lalàna, mpikatroka ary ny hafa te-hamakafaka na hanohana ny hevitry ny gadra manamarina hatrany ny satan'ireo gadra ireo.
Tsy tahaka ireo sehatra lehiben'ny mpitati-baovao izay tsy manonona afa-tsy ny fironana politikan'ireo gadra, hita ao amin'ny lahatahiry ny mahalahy na vavy sy ny vondro-pokon'ny tsirairay. Araka ny lahatahiry, manana gadra politika vehivavy miisa 15 i Vietnam ary avy amin'ny vondrom-poko vitsy an'isa iray ny 46 amin'ireo gadra politika ireo.
Asehon'ny tranonkala amin'izao fotoana izao fa 49 no miatrika fanagadrana mihoatra ny 10 taona, kristiana ny 33, 43 nosamborina tamin'ny taona 2017, ary mifandraika amin'ny fampiroboroboana ny fahalalahana ara-pivavahana ny tranga 83.
Raha fehezina, tohanan'ity rakitra ity ny fahatsapana iraisana, hita amin'ny tati-baovao sy ao amin'ny media sosialy fa nitombo tamin'ny taona 2017 ny fanenjehana ireo mpanivaka amin'ny fitenenana, ary tahaka izany ihany koa ny fanagadrana maharitra ny mpanoratra sy mpikatroka am-pilaminana.
Amafisin'ny lahatahiry ihany koa ny haavon'isan'ireo olona voampangan’ ilay andininy faha-88 malaza momba ny lalànan'ny heloka bevava na ny heloka amin'ny fanaovana “propagandy mamely ny fanjakana”.
Ny mombamomba ny tsirairay dia ahitana feno ny torohay momba ny fikatrohany, trangan-tantara, ny manjo azy ao am-ponja, ary ny antsom-panentanana hamotsorana azy ireo.
Ohatra, indro ny mombamomba an'i Hoang Duc Binh izay nosamborina noho ny fandefasana mivantana an-tserasera ny fihetsiketsehana fiarovana ny tontolo iainana tamin'ny taona 2017. Voampanga ho nanitsakitsaka ny andininy faha-330 na “manararaotra ny fahalalahana demaokratika hanitsakitsahana ny tombontsoam-panjakana.” Nomelohina izy tamin'ny volana lasa higadra 14 taona.
Mombamomba an'i Hoang Duc Binh. Lahatahirin'ny Gadra Politika Vietnamiana
Voafintina ihany koa ny momba an'i Hoang Binh:
Anisan'ny nahazo ny taom-panagadrana henjana indrindra ihany koa amin'izao fotoana izao i Binh. Nanamafy izy tao amin'ny fitsarana fa namoaka fanehoan-kevitra momba ny herisetran'ny polisy nandritra ny fandefasana mivantana, saingy notazoniny ihany koa fa tsy raharahan-keloka bevava ny azy satria izay no marina.
Asehon'ny lahatahiry ihany koa ny fiantraikan'ny fanagadrana mpikatroka sy mpanoratra amin'ny fianakaviany amin'ny fanomezana torohay amin'izay manjo ny fianakaviany. Iray amin'ny tanjona amin'ny fametrahana lahatahiry ihany koa ny fanamorana ny fanohanana ny fianakavian'ireo gadra politika.
Ohatra iray, fantatsika avy amin'ny tati-baovao fa migadra 10 taona noho ny nanoratana fandotoana ara-tontolo iainana sy zon'olombelona ny bilaogera Nguyễn Ngọc Như Quỳnh aka Me Nam (Reny Holatra). Saingy ao amin'ny lahatahiry isika afa-mahita ny manjo ny fianakaviany:
Ny renin'i Quynh, Nguyen Thi Tuyet Lan, ankehitriny no mikarakara ny zanak'i Quynh anankiroa. Arahina sy helingelenin'ny manampahefana i Lan hatramin'ny nisamborana ny zananivavy.
Mombamomba an'i Me Nam (Reny Holatra). Lahatahirin'ny Gadra Politika Vietnamiana
Nampanatena ny mpitarika ny Tetikasa 88 fa tsy ho ampiasaina hanaovana fanentanana ara-politika ny vola azo, fa natao hanampiana ny fianakavian'ny gadra politika.